Dowlada Soomaaliya oo faahfaahin ka bixisay weerarkii Hotel Ambassador-Sawirro – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
2nd June 2016 MAREEG Af Soomaali 0
Iyadoo lasoo gaba gabeeyey weerarkii ay soo qaadeen maleeshiyada Al-shabaab ayaa waxaa masuuliyiin katirsan dowlada oo gaaray goobta ay faafaahin ka bixiyeen qasaaraha weerarkaasi iyo sida ciidamada amaanka ay uga hortageen dhagarta Al-shabaab ay ku doonayeen in ay ku dhibaateeyaan shacabka.
Wasiirka Wasaarada Warfaafinta mudane Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa gudaha Hotelka warbaahinta ugu sheegay in ciidamada amaanku ay yareeyeen qasaaraha maadaama ay mid mid u toogteen dhagar qabayaasha weerarka soo qaaday.
Taliyaha NISA C/raxmaan Tuuryare ayaa sheegay in ciidamada NISA ay toogteen sadexdii dhagar qabe ee weerarka soo qaaday, islamarkaana ay mar walba ciidamadu u diyaarsan yihiin in ay ka hortagaan qorshaha Al-shabaab.
Wasiirka wasaarada Amniga C/risaaq Cumar Maxamed ayaa isna tilmaamay in lagama maarmaan ay tahay in loo midoobo la dagaalanka cadowga umada Soomaaliyeed oo mar walba ku howlan dhibaateynta dadka Soomaaliyeed.
Qasaaraha ka dhashay weerarka ayaa ilaa iyo hada aan si rasmi ah loo ogeyn maadaama ay jireen dad kale oo dhaawacyo qaba oo ciidanku subaxnimadii hore ee saakay ay kasoo saareen gudaha Hotelka.
Xildhibaanadii ku geeriyooday qaraxii Ambassador oo aas qaran loo sameeyay